Super Mario Run dia mila fifandraisana tsy tapaka amin'ny Internet | Vaovao IPhone
Izaho, izay tsy dia mpankafy lalao karazana runner na Super Mario, dia mahatsapa te-hilalao Super Mario Run Heveriko fa izany dia porofo mihoatra noho ny ampy fa ny anaram-boninahitra manaraka an'i Nintendo, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana avy amin'i Pokémon GO, ny famoahana andrasana indrindra amin'ny taona. Ho azo alaina ao amin'ny App Store ny lalao amin'ny 15 Desambra, saingy efa azo lalaovina izany raha mankany amin'ny Apple Store isika ary manandrana ny santionany amin'ireo iPhone azo alaina ao amin'ny magazay ara-batana an'i Apple.
Misaotra an'ity demo ity izay hita ao amin'ny Apple Stores dia efa afaka mahafantatra zavatra vitsivitsy momba ny fahatongavan'i Mario ofisialy ny fivarotana fampiharana Apple: Tsy ho afaka hilalao isika raha miala amin'ny Internet. Amin'ny fomba mitovy amin'izay mitranga amin'ny Apple Music, Nintendo dia nanapa-kevitra ny handray ity fepetra ity ho fiarovana amin'ny piraty. Ny fiasan'ity fepetra ity dia tsy inona fa ny karazana fifampidinihana tsy tapaka na tsy tapaka amin'ny lalao miaraka amin'ireo mpizara mba hiantohana fa tsy nisy nanelingelina azy na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba ahoana.
Hosokafanay ny atin'ny Super Mario Run amin'ny € 9.99
Ny ampahany tsara amin'ny adidy hifandray amin'ny Internet fotsiny no hitako rehefa milalao Super Mario Run: toy izany koa, amin'ny teôria, tsy afaka mikitika, mametaka na Cheater dia tsy afaka hampiasa fitaovana hahatratrarana vokatra tsara kokoa noho ny mpampiasa te-hilalao ara-dalàna. Ny zavatra ratsy dia, raha ny lojika, tsy ho afaka hilalao an'ity lohateny ity isika raha tsy misy fifandraisana Internet, izay Mety ho olana izany raha mankany amin'ny faritra tsy misy fandrakofana na Wi-Fi isika toy ny toerana matetika itsoahako miaraka amin'ny namako indraindray. Etsy ankilany, raha te-hieritreritra ratsy isika dia afaka mieritreritra ihany koa fa ho fantatr'i Nintendo amin'ny fotoana rehetra anaovantsika ny famoahana farany azy, izay heveriko fa tsy dia mampihomehy ireo mpampiasa.
Super Mario Run dia ho lalao azo sintonina maimaim-poana, saingy hisy famerana maro. Raha te-hilalao 100% amin'ny lalao isika dia tsy maintsy atao fividianana € 9.99, vidiny izay toa avo ho ahy noho ny filalaovan'ny mpihazakazaka. Toa tsara kokoa io vidiny io raha toa ny mpampiasa afaka misafidy amin'ny fotoana rehetra na hifindra amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa fa tsy hametra ny fifandraisantsika amin'ny fikasihana ny efijery ka hitsambikina i Mario.
Te hilalao Super Mario Run ve ianao sa ity adidy hifandray amin'ny Internet ity dia manova ny zava-drehetra ho anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Super Mario Run dia mila fifandraisana Internet mitohy